အန်တီသွယ် – My Blog
ဟေ့လူတွေ မယုံမရှိနဲ့ဗျခုပြောနေတာတွေက တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်နော် မကောင်းတတ်လို့ နာမည်တွေသာပြောင်းထားတာ …တကယ့်ကိုကြုံးခဲ့ရတာတွေတော့ အမှန်တကယ်တွေ .တကယ်လို့သာ အဖိုးကြီးတွေသိလျင် သူတို့လီးကို ခုတ်ဖြတ် ချင်စိတ်ပေါက်သွားမယ်
ကျွန်တော်ဆွဲခဲ့ရတာတွေလည်း အဖိုးကြီးတွေရဲ့ကတော် တွေလေ ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ…ကျွန်တော်ကျောင်းဆင်းကာစ မိခင်တပ်ရင်းကိုရောက်ရောက်ချင်းဘဲပေါ့တပ်ရင်းမှူးက သူ့အနားမှာဘဲခေါ်ပြီး အလုပ်အကြောင်းတွေသိအောင်ဆိုပြီး ခေါ်ထားတယ် အေးကွ … အောင်စိုး မင်းညနေရုံးဆင်းပြီးလို့ ရေချိုးပြီးလျင် ငါ့အိမ်လာခဲ့ ဥိးကွာ တပ်ထောက်က သစ်ဆိမ့်ပင်စိုက်ခင်းဖိုင် ယူခဲ့ကွာ..
တပ်ရင်းမှူးမှထိုကဲ့ သို့ပြောသောကြောင့် ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ အဘ ကျွန်တော်လာခဲ့ပါ့မယ် .ညနေရုံးဆင်းပြီး ရိပ်သာမှာရေမိုးချိုးပြီးတော့ ဖိုင်ကိုကိုင်ပြီး … ရင်းမှူးအိမ်ကိုလာခဲ့တယ်.တပ်ရင်းမှူး ခင်ဗျ … တပ်ရင်းမှူး ခင်ဗျာ .ကျွန်တော်အော်ခေါ်သော်လည်း ဘာအသံမှ မကြားရ .နောက်မှ တပ်ရင်းမှူးအိမ်မှာ နေတဲ့ ရဲဘော်လေးပြေးထွက်လားပြီး ဗိုလ်ကြီး ဘာအကြောင်းရှိလို့လည်း?အေးကွ တပ်ရင်းမှူး ဂေါက်ရိုက်ကပြန်လာပြီလားကွ.အော် ပြန်လာပြီ ခင်ဗျ တံခါးဖွင့်ပေးပြီး ဝင်ခဲ့လေဗိုလ်ကြီး .ခဏထိုင်ဦးနော် ..
ကျွန်တော်သွားပြီး သတင်းပို့ပေးမယ် ..အိမ်အတွင်းသို့ဝင်သွားသည် အိပ်ခန်းနားကနေအဘ အဘအေးကွ ဘာလည်း .အပြင်မှာ ဗိုလ်ကြီး အောင်စိုး ရောက်နေတယ် ခင်ဗျ အေးဟုတ်ပြီ ငါထွက်ခဲ့မယ် ..ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့နေရာနဲ့ သူတို့အိပ်ခနု်းနဲ့နီးတယ် .ကြားနေ ရတာကတော့ မသည်းကွဲဘူး…( အိုကွာ မောင်ကလည်း တော်ပြီကွာ အဟင့် ဟင့် ရေချိုးပါတော့
ဟိုမှာ စောင့်နေတယ်လေ ရပါတယ် သွယ် .ဖြည်း ဖြည်းပေါ့ .အိုး ဘာတွေ လုပ်နေတာလည်း အဲလိုကြီး မလုပ်ပါနဲ့ကွာ နော် နော်ဟုတ်ပြီ ညကျမှ ပြန်ဆက်မယ် ရေချိုးလိုက်ဦးမယ် သွား မောင်မောင်ကဲကဲ )ခဏလေးကြာတော့ တပ်ရင်းမှူး ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားတာတွေ့ လိုက်ရတယ် ပြီးမှ သူ့ကတော် အန်တီသွယ် ခေါ် မမသွယ် .အသက်တော့ နှစ် သိပ်မကြီးသေးပါ ရှိလွန်းလှ ၃၅ နှစ်ပေါ့ ..
အိပ်ခန်းထဲမှ ထွက်လာသည်အပေါ်ပိုင်းမှာတော့ အိမ်နေအကျၤီပါးလေး အောက်မှာကတော့ ထမီဖရိုဖရဲနဲ့ပေါ့ ဗျောင်ဝတ်ထားတာဆိုတော့ သူ့ကိုယ်လုံးကို ဖော်ပြသလိုဖြစ်နေတယ် .အော် ဗိုလ် အောင်စိုး ရောက်နေတာကိုး မင်းတို့တပ်ရင်းမှူးကတော့ ခုမှ ရေချိုးနေတုန်း စောင့်လိုက်ဦးကွယ် . ပျင်းနေမှာပေါ့ တီဗွီ ဖွင့်ထားပေးမယ်အော် ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ ရပါတယ် အန်တီ .ပြောပြောဆို ကျွန်တော့်ရှေ့က တီဗွီ ကိုဖွင့်ပြီးလိုင်းပြောင်းပေးနေတယ် ..ရှေ့တည့်တည့်မှာဆိုတော့ မျက်လုံးကလည်း မြင်တတ်တယ် .
တီဗွီ အလင်းရောင်က သူ့ထမီ ပါးလေးကိုဖောက်ပြီး အတွင်း ကအရာတွေကို ရေးရေးလေးမြင်နေရတယ် …တော်တော် လှတဲ့ဆော်ကြီးဘဲ ဗျာ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ချင်စိတ်တွေဖြစ်သွားမိတယ် ပေါင်ကြားထဲက လီးကြီးကထောင် နေပြီပေါ့ ..ပြီးမှ စိတ်ကိုထိန်းပြီး လျှော့လိုက်တယ် …
ကျွန်တော့်ရှေ့ကနေ ဖင်ကို လှုပ်လီလှုပ်လဲ့နဲ့ လှုပ်ပြီးလျှောက်သွားတယ် .ကြည့်ရတာ အထဲမှာ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီမပါဘူးထင်တယ်..အဲဒိနေ့က လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်ပြီး ရိပ်သာကိုပြန်ခဲ့တယ် တပ်ရင်းမှူး လေးလပါတ် အစည်းအဝေးသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပြီ ..တပ်ရေးဗိုလ်ကြီး လည်း အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ် ကျွန်တော်ရောဘဲ ..စိတ်ထင် ကျွန်တော်ပါလိုက် သွားရမယ်လို့ထင်နေတာ.နောက်မှ( အောင်စိုး မင်းတပ်ရင်းမှာဘဲ နေခဲ့တော့ ကွာ )ဟုတ်ကဲ့ အဘ . လိုတာရှိလျင် ဖုန်းဆက်ပြီးလှမ်းမှာလို့ရအောင် ငါမှာလျင်လည်း မင်းဘဲလာခဲ့ကွာ .ဟုတ်ကဲ့ အဘ …မှတ်မှတ်ရရဘဲ အဲဒီနေ့က မိခင်နဲ့ကလေး ကိစနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရာရှီလိုင်းဘက်ကိုရောက်တော့်ရင်မှူးအိမ်ဘက်ကိုအရောက်
စာရင်းတွေဝင် ပေးမယ်ဆိုပြီး ..အန်တီ အန်တီ ..အိမ်ရှေ့ကနေ ကျွန်တော်ခေါ်နေမိတယ် အိမ်ပတ်လည်မှာလည်း ခြံစည်းရိုးပင်တွေစိုက်ထားတယ် တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်လည်း နည်းနည်းလှမ်းတယ်လေ…အပြင်က ရုတ်တရက်ကြည့်လျှင် မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ နောက်မှ ရင်းမှူးကတော် ထွက်လာပြီး အော် ဗိုလ်အောင်စိုး ပါလား …ဘာအကြောင်းလည်းကွယ် …အိမ်ထဲဝင်ထိုင်ပါဦး .ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ အကျၤီထဲမှာ ဘာမှဝတ်မထားပါ …နို့သီးခေါင်းလေးကို အကျီထဲကမြင်နေရတယ်.ထမီကလည်းဗျောင်ဘဲဝတ်ထားတယ် ဖင်ကြီးကိုဝိုင်းနေတာဘဲဗျာ .. ခါးသေးသေး ကိုယ်လုံးလေးသွယ်သွယ်နဲ့ …
ကြိတ်ချင်စရာကြီးနော် . ကျွန်တော်လည်းထိုင်ခုံမှာထိုင်လိုက်တော့ … သူ့မှာ ဟိုရှာသလိုဒီရှာသလိုနဲ့ ကျွန်တော့်ရှေ့ကနေ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ အကျီက ဟိုက်သွား တော့ အတွင်းက နို့အုံကိုမြင်နေရတယ် ကြီးမယ်ထင်တာ မကြီးဘူးဗျ … နောက်မှ ထလိုက်တော့် ထမီစကိုနင်းပြီး လျှောကျသွားတယ် ကျွန်တော်လည်း အလျင်ဘဲ ဖမ်းပွေ့လိုက်တယ် ထမီကလည်းကျွတ်ချင်ချင်ဖြစ်သွားတယ် … အပြင်မှာက မိုးတွေရွာနေလေရဲ့ဗျာ ..ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ် သူ့လက်ကလည်း ကျွန်တော့်ကျောကုန်းကို လှမ်းဖက်ထားသေးတယ် ကျွန်တော်က သူ့ချိုင်းအောင်ကနေဖမ်းပွေ့ထားတယ် . လက်ထဲမှာက သူ့နို့ကိုဖမ်းဆုပ်ထားသလို အောက်ကလီးကြီးက စောစောကသူ့ကိုမြင်ပြီးကတည်းက တောင်နေတာ . ခုတော့ သူ့ဖင်ကိုထောက်ထားသလိုဖြစ်နေတယ် . သူ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့ ရဲနေတယ် ရှက်လို့ထင်ပါ့..
ကျွန်တော်လည်း မလွှတ်ပေးသေးပါ သူ့နို့လေးတွေကို အကျီပေါ်ကနေ အသာလေးပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် .. သူလည်းရုန်းဖို့မေ့နေတယ် ထင်တယ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကြီးကိုဖက်ထားတယ် ..အော်ကြွားရဦးမယ်… ကျွန်တော်က ကျောင်းမှာတုန်းက တပ်ခွဲမှာ ဘော်ဒီအလှဆုံးဗျ ရင်အုပ်ကျယ်ကျယ် လက်မောင်းကြီးကြီးနဲ့ . တော်ရုံဆော်ဆိုလျင်ကြွေသွားမယ် .. ကျောင်းမှာ တုန်းကခေါ်ကြတာဒုတ်ကြီးတဲ့လေ ကြီးတာလည်းပြောမနေဲ့ ကျပ်လုံးလောက်ရှိမယ် ရှည်တာကတော့ (၇) လက်မလောက်ပါဘဲ .အန်တီက အရမ်းလှတာဘဲဗျာ
အို .. ဘာတွေလာပြောနေတာလဲ? …လက်ကတော့မလွှတ်သေးပါ … ကျွန်တော်လည်း နို့တွေကိုမသိမသါ လေး ပွတ်ပေးနေပြိးနို့သီးတွေကို လက်ညှိုးလက်မနဲ့ ညှပ်ညှပ်ပေးနေလေရဲ့ .တကယ်ပြောတာပါ
အန်တီက လှတယ်ဗျ .ပေါင်ကြားကလီးကတော့ သူ့ ဖင်ကို တဒေါက်ဒေါက်နဲ့ပေါ့ .( မလုပ်ပါနဲ့ကွာ မင်းအဖိုးကြီး သိသွားလျင် ပြသ နာတက်နေပါဦးမယ်ကွာ )အန်တီကလည်း မသိအောင်လုပ်တာဘဲ ဘယ်သူသိမှာ မို့လို့လဲ? ..ပြောပြောဆိုဆိုကျွန်တော်လည်း သူ့လည်ပင်းသားတွေကို အသာ လေးနမ်းလိုက်တော့ ခေါင်းလေးမော့လာပြီးဟင်း ဆိုတဲ့ အသံလေးထွက်လာတယ် ..အိုး ကွာ လက်တဖက်က နေရာပြောင်းပြိး ဖင်သားတွေကို ဆုပ်နယ်ပေးနေ တယ် . ကျွန်တော့်ဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကို ဆွဲလှည့်လိုက်တယ် … အလိုက်သင့်လေးပါလာပြီး နှုတ်ခမ်းကိုအသာလေးဖိပြီးစုပ်ပေးလိုက် ပါးစပ်ထဲကို လျှာထည့်ပြီးမွှေပေးလိုက်တော့ သူလည်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုပြန်စုပ်လာတယ်အရဲစွန့်ပြီး အကျၤီကိုချွတ်ချလိုက်တယ် အားပါး မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟာကြီးကကြို ဆိုနေတယ် .
ထိပ်သီးလေးတွေနီနေတယ် သိပ်တော့မကြီးပါ … အသားဖြူတော့ ပိုဆိုးသေးတယ် … ကျွန်တော်လည်း ကုန်းပြီးစို့ပေးလိုက်တော့ သူကလည်း တ အင်း အင်းနဲ့ . ကျွန်တော့်လက်ကလည်း အငြိမ်မနေပါ သူ့ဖင်သားတွေကို ဆုပ် လိုက်ညှစ်လိုက်နဲ့ . သူလည်းအငြိမ်မနေနိုင်တော့ ကျွန်တော့်ဇစ်ကိုဆွဲချပြီး.. လီးကိုကိုင်ပေးနေတယ် …မမ အရမ်းချစ်တယ်ကွာ ဟာကွာ ဘာတွေပြော နေတာလည်း .ထမီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို လက်နဲ့ အသာလေးအုပ်ပြီးကိုင်လိုက် အကွဲကြောင်းထဲကိုလက်တစ်ချောင်းထည့်ပြိး ကလိပေး နေတော့ မနေနိုင်တော့ဘူးလေ ..လာကွာ အခန်းထဲသွားမယ် ဆိုပြီး ကျွန်တော့် လက်ကိုဆွဲသွားတယ် ကုတင်ပေါ်မှာသူကချေထောက်ချပြီးထိုင်နေတယ် .
ကျွန်တော့်အကျီတွေပါကူပြီးချွတ်ပေးနေတယ်… ဘောင်းဘီကိုလည်းချွတ်ပေးနေ တယ်… ပြီးမှ လီးကြီးကိုကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးနေလေရဲ့ဗျာအား အား ကောင်းလိုက်တာ မမရယ် .သူ့ဂုတ်သားလေးတွေကို မနာအောင် သွားလေးတွေနဲ့ကိုက်ပြီး ညီးပေးလိုက်တယ် လက်ကတော့ သူ့ကျောကုန်း တွေကို ပွတ်သပ်ပြီး …သူ့ကို အိပ်ယာပေါ်လှဲချလိုက်တယ် …နှုတ်ခမ်း ခြင်းတေ့စုပ်ပြိး အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းသွားတော့ နို့သီးလေးတွေကို လျှာ နဲ့ယက်ပြီးကလိလိုက် သွားနဲ့ကိုက်ချေပေးလိုက်နဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်နဲ့ ကလိလိုက်နဲ့ . ဗိုက်ကိုနမ်းပြီးအောက်ကို လျှောဆင်းသွားတော့ သူ့စောက်မွှေး တွေနဲ့ ဆီးခုံလေးကို အသာလေးယက်ပေးလိုက်တယ် …
လက်က နို့တွေကိုချေပေး ပြီး သာသာလေး စောက်ဖုတ်ကြားထဲကိုတိုးဝင်သွားတယ်… သူကလည်း အလိုက်သင့်လေး ပေါင်ဖြဲပေးထားတယ် .( အိုကွာ ဘာတွေလုပ်ဦးမလို့လည်း ‘ဒီလိုတခါမှ မခံဖူးဘူးကွာ … )မမ ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမလို့ပါဗျာ.. ဆိုပြီး … ပေါင်နှစ်ချောင်းကို အသာဆွဲဖြဲလိုက်တယ် … ပြီးမှ စောက်ဖုတ်ကြီး ကို သွားနဲ့ကိုက်ချလိုက်ပြီး .အကွဲကြောင်းလေးထဲကို လျှာသပ်တင်ပေးလိုက် တော့ သူ့ခမျာ ခါးလေးကော့ပြီး ကျွန်တော့်ခေါင်းကို အတင်းဘဲ သူ့စောက်စိရှိတဲ့ အပေါ်ကို ဆွဲတင်ပေးတယ်… ကျွန်တော်လည်းလျှာကို အလိုက်သင့်လေး … ၅ ထုတ်ထားလိုက်ပြီး သူ့လက်လှုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်သွားလိုက်တယ် ..
ခါးကလေး ကော့လိုက် လက်ကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး စောက်စိလေးကိုလျှာနဲ့ထိုးခိုင်းလိုက်နဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတယ် နောက်မှကျွန်တော်က စောက်ခေါင်းလေးထဲကိုလျှာထိုးထည့် ပြီး လျှာနဲ့လိုးပေးလိုက်တယ် .( အိုး အား အား.. အဟင့် ဟင့် … )ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်းကွာ မမ မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ ..( အို့ ဝိုး … ဟာ့ အ အား )အသံတွေတော့စုံလာပြီ သူ့စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို သွားလေးနဲ့ မနာအောင် ကြိတ်ပေးလိုက် စောက်စိလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ ကလိပေး လိုက် စောက်ခေါင်းထဲကို လျှာနဲ့လိုးပေးလိုက်တော့ … စောက်ရည်ကြည့်တွေထွက် လာတယ် …( အ အ အား မမ ပြီးတော့မယ်.. အ ဟ ဟ အာကွာ .. ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးကွာ … )
ခပ်ညုညုကလေးပြောသည် . ၂ မိနစ် လောက်ကြာတော့ သူ့စောက်ပတ်ထဲမှ စောက်ရည်တွေ ရွှဲပြီးထွက်လာတယ်… ကျွန်တော်လည်း ကုလားပဲဟင်းစားသလို ပါးစပ်တစ်ခုလုံးပေကျံသွားတယ်… အိပ်ယာခင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုဆွဲသုတ်လိုက်ပြီး ကုန်းထတယ် .( မမ ခံလို့ကောင်း လားဟင် ဟာကွာ ရှက်တယ် ဘာတွေလာမေးနေတာလည်း မမ ကမင်း အဖိုးကြီးသွားတဲ့နေ့ကတည်းက အလိုးမခံရတော့ စောက်ဖုတ်တွေယားပြီးခံချင်နေတာ မမကို မညှင်းဆဲနဲ့တော့ကွာ … လုပ်စရာရှိတာလုပ်တော့ကွာ .. )ကျွန်တော်လည်း စစ်ခရာသံကြားလိုက်သလိုဘဲ ထစ်ကနဲထပြီး လီးကို ဆွနေလိုက်တယ် ..
ပေးကွာ မမ လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်လီးကြီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ် လီးမှာလည်း အရည်ကြည်တွေရွှဲနေပြီမို သူ့လက်မှာချောဆီသုတ်ပေးလိုက်သလိုချောနေ တယ် .( အား အား ကောင်းလိုက်တာ မမ ရယ် .. )ကျွန်တော်လည်း ခေါင်းကို နောက်ပြန်လန်ပြီး ညီးပေးလိုက်တယ် .. နောက်မှ လီးကို အသာကိုင်ပြီးသူ့စောက်ပတ်ဝမှာတေ့ပေးလိုက် တယ် သူ့လက်နဲ့ဘဲ ကျွန်တော့်လီးဒစ်နဲ့ သူ့စောက်စိလေးကို ဆွံဲ၂ပြီးပွတ်ပေး နေတယ် . ပြီးမှ စောက်ခေါင်းဝမှာတေ့ပေးနေတယ်
ကျွန်တော်က ခါး လေးကို အသာကော့ပြီး ဒစ်မြုတ်ရုံလေးသွင်းပေးလိုက်တော့..( အ အား.. ဟာ့ နာတယ်ကွာ … သူ့လီးကြီးက နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး မမစောက်ဖုတ် တစ်ခုလုံး အပြည့်အကြပ်ဘဲကွာ )ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုလည်းလက်ကလေးနဲ့တွန်း ထားသေးတယ် .မမ နာလို့လားဟင် .
အင်း နည်းနည်းနာတယ်ကွာ …‘ဒါဆို ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးဘဲသွင်းမယ်နော် အင်း ဖြည်းဖြည်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်က လီးကို အသာလေးပြန်ဆွဲနှုတ်ပြီး ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ သူ့စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေပါအောင် အထဲကို အသာလေးသွင်းထည့်လိုက်တော့( အ အ အား … ကောင်းတယ်ကွာ နည်းနည်း ထပ်သွင်းပါဦးကွာ …)သူက လိုလိုချင်ချင်နဲ့တောင်းနေရှာတော့ ကျွန်တော်လည်း တဝက်လောက်ထိ ခပ်ဖိဖိလေး ဆက်သွင်းပေးလိုက်တယ်( အား ကွာ ရင်ထဲမှာ တမျိုးကြီးဘဲ အ အ . )ကျွန်တော်လည်း အဆုံးထိမသွင်းသေးဘဲ တဝက်လောက်နဲ့ညှောင့်လိုးပေးနေလိုက်တယ် အချက် ၂၀ လောက် ညှောင့်နေရာမှ စိတ်မရှည်တော့ဘဲ အဆုံးထိ ဆောင့်သွင်းလိုက် တော့်( ဗြိ ဗြိ …ဒုတ် . အား အား )သားအိမ်ကိုသွားဆောင့်တယ်ထင်တယ် အထဲမှာ တခုခု တားလိုက်သလို တခုခုနဲ့ တိုက်မိသလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်( ဘာလို့ လည်းမမ …တအားနာသွားတယ်ကွာ မင်းက တအားဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တာကိုးကွ သားအိမ်ကိုသွားထိမိတာပေါ့ .. ဖြည်ဖြည်းလုပ်ပါကွာ နော် နော်လို့… )အဲဒီလိုမျိုးကြားရတော့ ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းသနားသွားတယ် .
အဖိုးကြီးနဲ့ အလိုးခံထားဖူးတယ်ဆိုပေမယ့် ကလေးမမွေးရသေး… နောက်တခုက အဖိုးကြီးလီးက သေးတယ်ထင်တယ် ရှည်မယ်လည်းမထင်ဘူး အနေတော်လောက်ဖြစ်မှာပါ ကျွန်တော့်လီးက သူ့ထက်လည်းကြီးမယ် ရှည်တယ်ဆိုတော့ မမ က ဘယ်ခံနိုင်ပါ့ ဦးမလည်းပေါ့ .ကျွန်တော်လည်း သူ့ချေထောက်၂ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ အသာလေးဆောင့်ဆောင့်ပေးနေမိတယ် ခါးကိုလည်းမွှေ့မွှေ့ပေးနေတော့် …မမက အောက်ကနေပြီး ခါးလေးကော့ပေးလိုက်ချိန် လီးကြီးမှာ အရသာကို ရှီသွားတာဘဲဗျာ( အဟင့် အင့် အင့် အား အား … ကောင်းတယ်ကွာ ကောင်းတယ်..
ဆက် ဆောင့်ပေး ဆောင့်ပေး…) ကျွန်တော့်ပေါင်တွေကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြိး ငြီးပြော လေးပြောနေရှာတယ် .. ကျွန်တော်လည်း ဆောင့်ဆိုတဲ့အသံလေးကြားရော ခပ်မှန် မှန်လေး ဆောင့်ပေးနေမိတယ် .. လက်တွေကတော့ နို့တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီးညှစ် ပေးနေတယ် ..( အား ဆောင့်ကွာ ဆောင့် ဆောင့် တအားဆောင့်တော့ မမခံနိုင် လာပြီ ဆောင့်ပေးကွာ ဆောင့် . မမ ပြီးတော့မယ် အား ပြီးတော့မယ် )ကျွန်တော်လည်း နွားသိုးကြိုးပြတ် ဆောင့်လိုးပေးနေမိတယ်( ဖောင်း ဖောင်း ဖတ် ဖတ် .အား.. အား.. အင..့် အင့် .. ကောင်းတယ်ကွာ )ကုတင်ကလည်း..
တကျွီကျွီနဲ့ အသံတွေ ခေါင်းရင်းကို ကုတင်နဲ့စောင့်တဲ့အသံ( ဗြောင်း ဗြောင်း ..)ဆိုပြီး ပိုမြည်လာပါတော့တယ် အောက်ကလည်း ခါးကလေးကိုကော့ကော့တင် ပေးနေတော့ လိုးရတာ တအားကိုဇိမ်တွေ့နေမိတောတယ် … တအား ၁၀ ချက်လောက်လည်း ဆောင့်လိုးပြီးရော( အာ ဟား အ.. အ .. )ကျွန်တော့် ပေါင်ကို လက်နဲ့တအားဆုပ်ပြီး( ကောင်းတယ်ကွာ မမ ပြီးပြိ .. အ.. အ )မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ဆက်ငင်ဆက်ငင်နဲ့ တုန်တက်လာပြီး စောက်ခေါင်းထဲက စောက် ရည်တွေထွက်လာတယ် .( ကျွန်တော်လည်းသူဇိမ်ပျက်သွားမှာဆိုးလို့ မှေးပြီး ဆောင့်လိုးပေးနေတယ်
( ပြစ် ပြစ် ပလစ် ပလစ် .. )ဆိုတဲ့အသံတွေကလီး ဝင်တိုင်းစောက်ရည်တွေနဲ့ ချောပြီးထွက်ထွက်လာတယ် .. သူကဘဲ( မောင်လေး ပြီးပြီလား ..ကျွန်တော်က ဟင့်အင်း ပြီးတော့မယ် ဒါဆိုဆက်လိုးလေကွာမမတစ်ယောက်တည်းကောင်းလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမောင်လေးလဲ ကောင်းအောင် လုပ်ဦးပေါ့နော် )ကျွန်တော်လည်း ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြိး နည်းနည်းအရှီန်တင်လိုက် တယ် . ဘေးကစောင်တစ်ထည်ယူပြီး လိုးရင်းနဲ့ဘဲ စောက်ပတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်တွေကို သုတ်နေမိတယ် ..( ဖြောင်းဖြောင်း … ဖြောင်းဖြောင်း အ အ အားအား ကောင်းတယ်ကွာ ဆောင့် ဆောင့် )ကျွန်တော်လည်း အသားကုန်ဆောင့်နေမိတော့တယ် .မမက မောနေပြီလားမောင်လေး မောင်လေး အောက်ကနေအိပ်ကွာ မမ တက်ဆောင့်ပေးမယ်ဆိုပြီး …ကျွန်တော့်ကို ဆွဲလှဲချလိုက်တယ် .
လီးကတော့စောက်ပတ်ထဲကကျွတ်မသွားပါ . ပြီးမှ သူက အပေါ်ကနေ ဖင်ကိုကြွလိုက်ထိုင်ချလိုက် စောက်ခေါင်းထဲက အတွင်းသားတွေနဲ ထိအောင် မွှေနေလိုက်နဲ့ ဇီမ်ခံနေတယ် ကျွန်တော်လည်း အလိုက်သင့်လေးမွှေပေး လိုက် ကော့ထိုးပေးလိုက်နဲ့ အောက်ကနေ ခံလို့ကောင်းနေတယ် .( အ အ အဟင့် အ အား ရှီး ရှူး အား .. ရှီး . )အပေါ်ကနေတအားဆောင့်ချနေ ပြီး ကျွန်တော်ကလည်း ပြီးခါနီးပြီမို ဖင်ကိုကော့ကော့ထိုးပေးနေတယ် … သူကလည်း ဖိချလိုက်ဆောင့်ချလိုက်မွှေနေလိုက်နဲ့( အ အ ရှီး ရှီး ကောင်းတယ်ကွာ ကောင်းတယ် .. အ အ မ..မ ပြီး … ပြီး … အား .. ရှိး ဟား … ) အသက်ရှူသံတွေမြန်လာတယ် ကျွန်တော်လည်း ကော့ထိုးရင်းနဲ့ သူ့ခါးကိုကိုင်ပြိး ဆောင့်အားကောင်းအောင် ဆောင့်ချပေး ကော့ထိုးပေးရင်း( အ အ မမ ကျွန်တော်.. ပြီးပြီအား ကောင်းလိုက်တာ မမ ရာ … ဟင်း ဟင်း )မမကလည်းကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ခွရက်ကလေးမှောက်ချပြီး အသက်ကိုမှန်အောင်ရှူ နေတယ်
ကျွန်တော်လည်းမမ ဆံပင်တွေကိုနမ်းပြိး လက်တွေက ဖင်သားတွေကို ညှစ်ပေးလိုက် ကျောလေးကိုပွတ်သပ်ပေးလိုက်လုပ်မိတယ် မမက( အရမ်းကော င်းတယ်ကွာ . ၂ ခါတောင်ပြီးသွားတယ် အဖိုးကြီးနဲ့ဆို ၁ခါပြီးအောင်မနည်း ကိုကြွအောင်လုပ်ရတယ် တခါတခါ သူအရင်ပြီးပြီး ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ မမ မှာ မပြီးရဘဲ ဟတ်ကော့ကြီး ကျန်နေရတဲ့ ရက်တွေအများကြိးဘဲကွာ ) မောင်လေးကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်
မမတခါမှမခံဖူးတဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလည်းမှုတ်ပေးတယ် မမကိုလည်းအလိုလိုက်ပြီး မမစိတ်ကျေနပ်အောင်ပြီးအောင် အမျိုး၂လုပ်ပေးတယ်ကွာကျွန်တော်ကလည်းမမကို စစမြင်ကတည်းက လိုးချင်နေတာပါ မတတ်သာလို့ သာစိတ်ကိုဖြေနေရတာပါ. ခုလိုမျိုးကျတော့မမကို ပိုပြီးသနားသွားချစ်သွားမိပြီဗျာ နောက်နေ့တွေလိုးချင်လျင် ဘယ်လိုဆုံကြမလည်းဗျာ.မမက …နေပါဦးလေ မမ ကြံဖန်ပြီးလုပ်ပေးပါ့မယ် မြို့ထဲမှာ မမတို့ ဝယ်ထားတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိတယ် အဲဒီမှာလိုးလို့ရအောင်မမ ကြိုးစားကြည့်မယ်ကွာ
မောင်လေးနဲ့အလိုးခံရတာ တအား ဇိမ်ရှိတာဘဲကွာ …ကျွန်တော့်ကို ဆွဲငင်အားကောင်းတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ပြီး ခပ်ညု ညု လေးပြောသည် .. အဝတ်စားကိုယ်စီဝတ်ပြီး နောက်ဆုံးလက်ကျန်တနှာကို နှုတ်ခမ်းစုပ်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး … လူမသိအောင် အသာလေးကုပ်ချောင်းချောင်း ပြန်ခဲ့တယ်ဟင်း ဟင်း မမသွယ်တို့က ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီး ဗိုလ်ကြီးငယ်ငယ်လေးနဲ့ကြိတ်ပုန်းခုတ်နေတယ်ေ ပါ့လေ ဟယ် မိဇာခြည် … မင်းဘယ်လိုသိလည်း မမသွယ်မှ အံ့သြဟန်ဖြင့်ပြော သည်.ဇာခြည်သိတာ မမသွယ်တို့ စပြိးအလုပ်ဖြစ်ကတည်းက ဇာခြည်က မမသွယ် ဆီအလာ အခန်းထဲမှာ အသံတွေကြားလို့ချောင်းကြည့်ခဲ့တာ … ကြားကြားချင်းတော့ စဉ်းစားမိတယ် တပ်ရင်းမှူးလည်း ၄ လပတ်သွားတာ မမသွယ်ဘယ်လို လုပ်ပြီး ဖြစ်နေပါလိမ့်ပေါ့
ကြည့်မှဘဲ ဗိုလ်ငယ်ငယ်ချောချောနဲ့၂ပါးသွားနေတာကိုးဟဲ့ ဇာခြည် .ဒီအကြောင်းတွေ နင်နဲ့ငါ ၂ ယောက်ဘဲသိတာကောင်းပါတယ်အေ နို့မို့ဆို အဖိုးကြီးသိလျင် ဟိုကောင်လေးရောငါရောသတ်ခံထိမှာ.ဟာ မမသွယ် က လည်း ဇာခြည်ပါ သတ်ခံထိအောင်ကြံပေးပေါ့
ဟုတ်ဘူးလား ကိုကိုမြင့် လည်းရှေ့တန်းသွားနေတော့ ဇာခြည်လည်း မခံရတာကြာပြီလေ…ဒီလိုအခါအခွင့်သင့်တာမျိုးကိုစောင့်နေတာ ဇာခြည် ဆိုသည်မှာ မမသွယ်တို့တပ်ရင်းမှ ရှေ့တန်းထွက် နေသော ဗိုလ်ကြီးကိုကိုမြင့် ဇနီးဖြစ်သည် အရပ်ကမနိမ့်မမြင့် … မမသွယ်လို ခါးသေးသေး ဖင်ဝိုင်းဝိုင်း … ကိုယ်လုံးသွယ်သွယ် …အသားကတော့ မမသွယ်လို တအားမဖြူပါ ..ငါလည်းကိုယ်ချင်းစာပါတယ်အေ .မနက်ဖန် နင်မြို့ထဲက ငါတို့ အိမ်မှာစောင့်နေ ငါ ကောင်လေးကိုလွှတ်လိုက်မယ် သူ့ကိုတော့ဘာမှမပြော ထားဘူး နင့်ဘာသာနင် မိန်းမမာယာသုံးပြိး ဆွဲစားလိုက်ပေါ့ .ဟုတ်ပြီလား အိုကေ မမသွယ် မနက်ဖန် စနေဆိုတော့ တပ်ရင်းလုပ်အားပေးပြီးတာနဲ့ ဇာခြည် သွားစောင့်နေလိုက်မယ်
သူလည်း အားတာပေါ့ … ရုံးပိတ်ရက်ဘဲ စနေနေ့ဆိုတော့ မနက်ပိုင်း တပ်ရင်းလုပ်အားပေးမှာ ယောင်ပေပေ လုပ်ပြီးတော့ ရိပ်သာမှာနားနေတုန်း ရဲဘော်လေးတစ်ယောက်က ဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်ကြိး …တပ်ရင်းမှူးကတော်က တပ်ရင်းစာကြည့်တိုက် ကိုခဏလာပါဦးတဲ့ အေးကွာသွားလိုက်မယ် …မင်းပြန်တော့် ကျွန်တော်လည်း ချွေးသုတ်ပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် အဝတ်အစားလဲပြီးထွက်လာတယ်..မောင်လေး .
မြို့ထဲက အိမ်ကိုခဏလာခဲ့ပါဥိးကွယ်.. အကြောင်းရှိလို့နော် …မျက်လုံးရွှဲဖြင့်ပြောရှာသည်ဟုတ်ကဲ့ မမသွယ် … အင်း စားရဦးမှာပေါ့ ..စိတ်ထဲမှာကြိတ်ပျော်နေမိသည် ..မမသွယ်တော့ငါ့ကို ခိုက်သွားပြီထင်တယ် .. ဒီတစ်ခါတော့် ဖင်ထောင်ပြီးလိုးပစ်မယ် …ဆိုပြီးစိတ် ထဲက ကြုံးဝါးပြိး ရိပ်သာကိုပြန်ခဲ့တယ် ရေမိုးချိုးပြိး ဆိုင်ကယ်ကိုထုတ်လိုက် တယ်.. ဦးတည်နေတာက မြို့ထဲက တပ်ရင်းမှူး အိမ်သစ် ခြံအပြင်မှဘဲလ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်
( ကလင် ကလင် ကလင် ကလင် )ခဏနေတော့တံခါးပွင့်လာသည် စိတ်ထဲမှာ မမသွယ်များလားပေါ့ … တက်တက်စင်အောင်လွဲသွားသည်မြင်လိုက်ရတာက မမသွယ်လို ကိုယ်လုံးမျိုးနဲ့ အပေါ်ကအကျၤီကို ကိုယ်ကြပ်ဝတ်ပြီး အောင်က ပါတိတ်ထမိကိုခါးတင်းနေအောင်ဝတ် ထားတဲ့ အစ်ကိုကြီး(ဗိုလ်ကြီးကိုကိုမြင့် ကတော် ) မဇာခြည် .ဟယ် ဗိုလ်ကြိး အောင်စိုး ပါလား ဟုတ်တယ် အစ်မ . လာလေအိမ်ထဲဝင်ထိုင်ပေါ့ .မမဇာခြည်က ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်နေတာလည်း ..အော် မမသွယ်က လမ်းကြုံ လျင် သူတို့အိမ်ကိုဝင်ပြီးနည်းနည်းစစ်ဆေးပါဦးဆိုလို့ပါ .
ခဏနော်.. ဆိုပြီး အိမ်အတွင်းထဲကိုဝင်သွားတယ် ]..နောက်မှ( အောင်မယ်လေး .. နာလိုက်တာ )ဆိုပြီး အတွင်းမှကြားလိုက်ရတယ် . ကျွန်တော်လည်း ထိုင်ရာ မှထပြီး အတွင်းထဲကိုပြေးဝင်သွားလိုက်တယ် …မြင်ကွင်းကတော့ မမဇာခြည်ထမီက ခြေသလုံးအထက်နားလောက်ထိလန်တက်နေပြီး ူးတစ်ချောင်းကိုလည်းထောင်ထားတယ် ပေါင်းတွင်းသားဖွေးဖွေးလေးတွေက အနည်းငယ်ပေါ်နေတယ် . အတွင်းမှာဝတ်ထား တဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီ မဖြူရောင် ကိုလည်း မသဲမကွဲတွေ့နေရတယ် ..
ဘာဖြစ်တာလည်း မဇာခြည် အေးကွယ်ခြေထောက်ခေါက်ပြီးချော်လဲ လို့.. မမကိုတွဲကူပါဦကွယ် ..အော်ဟုတ်ကဲ့ .ကျွန်တော်က သူ့လက်ကိုတွဲ ပြီးထူထတော့ သူက ခြေထောက်လေးထောက်လိုက်ပြီးမှ( အား နာ တယ် ကွယ် မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးကွယ် … )ဒ‘ါဆိုကျွန်တော်ပွေပြီးခေါ်သွားမယ်နော် အင်း အဲဒီလိုခေါ်မှ ရမှာပေါ့ …ကျွန်တော်လည်း သူ့ချိုင်းကြားထဲကိုလက် လျှိုပြီးတဖက်ကဒူးကောက်ခွက်အောက်ကနေ သိုင်းပြီးပွေ့ချီသွားလိုက်တယ်ဆေးလူးမှရမယ်ထင်တယ် ဆေးပုလင်းက အခန်းထဲမှာဘဲရှိမှာပေါ့ …ကျွန်တော်လည်းအဲဒီလောက်မညံ့ပါ ဘာကိုဆိုလိုတာလည်းဆိုတာ ချက်ချင်းသိတယ် အိပ်ခန်းတံခါးကို ဖွင့်ပြီး မမဇာခြည်ကို အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲအိပ်စေလျက် …ဗီရိုပေါ်မှာဆေးပုလင်းရှိမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်လည်း လှည့်ပြီးယူလိုက် ပြန်လှည့်လာတော့ သူ့ထမီကို ပေါင်လည်လောက်ထိ ဆွဲတင်ပြီးသွားပြီ … အသက်ရှူမှားသွားလောက်အောင် ပေါင်တံဖွေးဖွေးလေးတွေက ပေါင်ကိုလည်း အနည်းငယ်ဟထားသေးတယ် .
ထမီကို ပေါင်ကြားထဲမညှပ်ဘဲ အပေါ်မှာလုံးပြီး တင်ထားတယ်. ပင်တီအဖြူရောင်က အတိုင်းသားမြင်နေရပြီ … ကျွန်တော့် ပုဆိုးကြားထဲမှာတော့ ဘာမှအနှေင်အဖွဲ့မပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်တိုက်ပွဲဝင်လီးကြီး က တောင်မတ်နေပြီ… ပထမတော့ သူဘေးမှာထိုင်ချလိုက်ပြီး ဆေးလိမ်းပေး မယ်နော် မမဇာခြည် …အင်း လိမ်းပေးလေ …ကျွန်တော်လည်းဆေးကို အနည်းငယ် ကော်ယူပြီး သူ့ခြေသလုံးသားတွေကို အသာလေးညှစ်ပြီးဆုပ်လိမ်းပေး လိုက်တယ် …( ဆေးဆိုသည်မှာ နှမ်းဆီအစစ်ပုလင်းသာဖြစ်သည် ။ )ကျွန်တော်လည်း အလုက်သင့်လေးပွတ်လိမ်းပေးနေမိရာမှဒူးအပေါ်ပိုင်းနေရာလောက်မှာ ပွတ်ပေးနေမိတယ် … သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းပြီး အိပ်ယာ ခင်းတွေကို ခြေနေတာတွေ့ရတယ် … နောက်မှကျွန်တော်လည်း အကဲစမ်းပြီးတော့ သူ့ပေါင်လည်ကြားထဲကိုဝင်ထိုင်ပြီး ပေါင်ရင်းလောက်ရောက်နေတဲ့ထမီအောက်နားတွေ ထိလက်ကလေးနဲ့အသာလေးပွပ်ပေးနေမိတယ် …
သူ့ဆီကအသံ( မောင်လေးရယ် မမ မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ . )ညီးသံလေးဖြင့်ပြောနေရှာသည် ..ဒါဆိုမမဇာခြည် ကျွန်တော်လည်းစိတ်မထိန်းထားတော့ဘူးဗျာ စိတ် အလိုကိုလိုက်လိုက်တော့မယ်နော် မောင်လေးသဘောပါဘဲကွာ …ကျွန်တော် ကလက်လေးနဲ့သူ့ပေါင်တွင်းသားလေးတွေကိုဆုပ်ခြေပေးလိုက်တော့( အို့ အဟင့် အင့် . )သူ့အတွင်းခံပေါ်ကနေဘဲ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်ခလယ်လေးနဲ့အပေါ် အောက် ပွက်သပ်ပေးပြီး စောက်စေ့ရှိတဲ့နေရာလေးကို ခပ်ဖိဖိလေးပွတ်ပေးလိုက်ချိန်မှာ တော့( အိုး အိုး အား အ )ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလည်း မောင်ရယ် .ကျွန်တော့်စောက်ဖုတ်ပွတ်ပေးနေတဲ့လက်ကို သူကဆွဲကိုင်တယ် .
နောက်ပြီး စောက်စေ့နေရာလောက်ကနေဘယ်မှမသွားအောင် သူ့လက်ကကျွန်တော့်လက်ကိုကိုင် ပြီးခပ်ဖိဖိလေးလုပ်ပေးနေလေရဲ့ . အင်းကြည့်ရတာသူက မမသွယ်ထက်ပင် ပိုပြီး လိုချင်တက်မက်စိတ်များတယ်. ကျွန်တော့်လက်တဖက်က သူ့ကိုယ်ကြပ်အကျီ် အစိမ်းနုရောင်လေးအပေါ်ကနေ နို့တွေကိုဆုပ်နယ်ပေးနေတယ် .သူ့လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ဂုတ်ကို လှမ်းကိုင်ပြီး ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်ဖို့သူပြင်နေတယ် ကျွန်တော်လည်းအလိုက်သင့်လေး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုစုပ်ပြီး သူ့လျှာကိုပါစုပ်လိုက် တော့ သူအတော်နေရခက်သွားပြီး လက်က ဂုတ်တွေကိုပိုပြီးဖိချလိုက်တယ် ..
ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကိုလည်းသူပြန်စုပ်နေလိုက်တာများပြတ်ထွက်မလားလောက်ဘဲ သူဘာသာသူ့အကျၤီတွေချွတ်နေပြီး ဘရာဇီယာချိတ်ကိုဖြုတ်ခိုင်းနေသေးတယ် .. ကျွန်တော်လည်းလှမ်းဖြုတ်ပေးပြီး … ဝိုး ဝိုး .လှလိုက်တဲ့နို့အုံလေးတွေ မကြီး မသေး အနေတော် ကိုင်ကောင်းရုံလေး နို့သီးလေးတွေကနီညိုရောင်သန်းနေပြီးတအား မကြီးပါ မမသွယ်ရော မဇာခြည်ပါ ကလေးမမွေးဖူးသေးပါ .. အဲဒါကြောင့် လိုးလို့ကောင်းသည်
ကျွန်တော်လည်းနို့တွေကိုကုန်းစို့ပြီး လက်တဖက်နဲ့ချေပေး နေလိုက်တယ် … အောက်ဘက်မှာတော့ထမီကိုချွတ်ချလိုက်တော့ မြင်လိုက်ရတာ ဘောင်းဘီအဖြူပေါ်မှာဘဲ စောင်ဖုတ်၂ခြမ်းကြားထဲက လိုင်းပေါ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရ တယ် … ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ … ဘောင်းဘီအဖြူကို အသာလေးလိပ် ပြီးချွတ်လိုက်တယ် စောက်မွှေးရေးရေးလေးတွေနဲ့အတူအောက်မှာကမို့မောက်နေ တဲ့စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေး လိုးချင်စရာဗျာ . မမသွယ်စောက်ဖုတ်ကတမျိုး နည်းနည်းအလျားရှည်ပြီးစောက်စိချွန်တယ် .. မဇာခြည်ကျတော့စောက်ဖုတ်မောက်သည် စောက်စေ့နည်းနည်းတိုသည် . ကြည့်လို့ပိုကောင်းသည် ယောကျာ်းတွေစွဲမက်စရာ စောက်ဖုတ်ပေါ့ဗျာ . လို့းလို့စောက်ရမ်းကောင်းတဲ့စောက်ဖုတ်မျိုး
ကျွန်တော်လည်းအဝတ်အစားတွေချွတ်ချလိုက်တော့ဘောင်းဘိကြားထဲက အကာအကွယ် မဲ့ သန်မာတဲ့လီးကိုလည်းမြင်ရော နည်းနည်းဖင်ကြိမ်းသွားဟန်ဖြင့် မျက်လုံးပြူးသွား တယ် … ပြီးမှကျွန်တော်ကသူ့လက်ကိုယူပြီးကျွန်တော့်လီးပေါ်ကိုတင်ပြီးကိုင် ခိုင်းလိုက်တယ် .သူလည်းခေသူမဟုတ်ကို လီးကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်နဲ့ဂွင်းတိုက် ပေးနေတယ်.ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို အသာတွန်းလှဲပြီးသူ့ပေါင်ကြားထဲကို ခေါင်းတိုးဝင်ပြီးစောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းကိုဖြဲချလိုက် စောက်စေ့လေးကိုလျှာလေးနဲ့အသာ လေးယက်ပေးလိုက်လေတော့( အ အ အား ရှိး )ဖင်ကြီးကော့ တက်လာပြီးလက်တွေက အိပ်ယာခင်းကိုဆွဲလိုက်ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအတင်းစောက်ဖုတ် ကြီးနဲ့ဆွဲကပ်ထားလိုက်နဲ့ အငြိမ်မနေနိုင်…
ကျွန်တော်ကလည်းအထက်အောက် လေးလျှာနဲယက်ပေးလိုက်( ပြွတ် ပလပ် ပလပ် . )( အား ကောင်းလိုက်တာ ကွာ )သွားလေးနဲ့ကိုက်ပေးလိုက် စောက်စေ့လေးကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့စုပ်ပေးလိုက် . စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုကိုက်လိုက် စောက်ခေါင်းထဲကိုလျှာနဲ့ထိုးပြီးလိုးပေး လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် …( အအ အိုး ဘယ်လိုလုပ်နေတာလည်း … )ကောင်းလိုက်တာကွာ ကောင်းတယ် စောက်စေ့ကိုလျှာနဲ့ကိလပေးကွာ ခံလို့ကောင်း တယ် စောက်ဖုတ်ထဲကို လက်နဲ့ထိုးပြီးမွှေပေးကွာ မမပြီးတော့မယ် ..( အ အ ပြိး ပြီး တော့မယ် … )ကျွန်တေ်လည်း လက်နဲ့ခပ်သွက်သွက်လေး လိုးပေးမွှေပေးလိုက်တော့ ( အ အား အိုး ပြီး ပြိး ပြီးပြိကွာ … )ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် .
အရမ်းဖီးလ်ရှိတာဘဲကွာ.. မောင့်ကိုတော့ မမ အရမ်းခိုက်သွားပြီကွာ .ဟာ မမ ကလည်း ကျွန်တော့်ကိုလည်းဒီအတိုင်း မထားနဲ့ဥိးလေဗျာ …ဒီမှာလီးကြီးက မတောင်တော့ဘူး ..ငြိမ်နေပြီဗျ ဟာ ဟ … ရတာပေါ့ကွာဆိုပြီး …ကျွန်တော့်ကိုပေးအိပ်စေပြိး သူကကျွန်တော့် ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး လီးထိပ်ကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ကလိပေးနေတယ် ..( အား အ မ မ အား … )ဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးနေတာလည်းကွာ မောင်မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ သူကလည်းမလျော့ပေးဘဲနဲ့ဒစ်ကိုသွားနဲ့ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ် သူ့ခေါင်းကို အထဲတိုးဝင်လိုက်တိုင်း ထွက်လိုက်တိုင်း သူ့သွားတွေက ကျွန်တော့်ဒစ်ကိုသွားသွား တိုက်နေတော့ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ .
နောက်ပြီးလီးတစ်ချောင်းလုံးကို သူ့အာခေါင်ထဲထိရောက်အောင်သွင်းထားလိုက်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက လီးအဖျားပိုင်းကို စုပ်ပေးနေတော့ ..( အ အ အား ဝိုး အား )မမရယ်ဘယ်လိုတွေလုပ် နေတာလည်းဗျာတစ်ကိုယ်လုံးလေထဲကိုရောက်သွားသလိုဘဲ .ဆက်ပြီးအာခေါင် ထဲထိရောက်အောင်လိုးပေးနေတယ် ကျွန်တော်လည်း မခံနိုင်တော့်တဲ့အဆုံး သူ့ပါးစပ်ထဲမှာ( အ အ အ မမ ပြိး တော့မယ် ဗျ .. အ အ )ရတယ်မမ ပါး စပ်ထဲမှာဘဲပြီးလိုက်တော့ …( အ အ ရှီးး)သူ့ပါးစပ်ထဲမှာဘဲ သုတ်ရည် တွေကိုပန်းထုတ်လိုက်တယ် ကျွန်တော့်စိတ်ထင် အာခေါင်ထဲထိပန်းထည့်ပေးလိုက်တယ်ထင် … သူလည်းမထွေးထုတ်ဘဲနဲ့သုတ်ရည်တွေကိုမျိုချပေးလိုက်တယ် …မမ ဗျာ မောင်တော့ အရမ်းချစ်သွားပြီ မမကို သွား မောင်လူဆိုးကဲကဲလေး တော်ကြာ မမသွယ်ကိုသွားသွားလိုးပေးနေဦးမယ်ဟုတ်လား .
ဟာ မမဒါတွေ ဘယ်လိုသိလည်း …မင်းတို့လိုးတဲ့နေ့က မမက မင်းတို့ကိုတွေ့သွားတာကိုးကွ ..အဲဒါကြောင့်မမသွယ်နဲ့ညှိပြီးမင်းကိုဒီအိမ်ရောက်အောင် ဖန်တီးလိုက်တာပေါ့ကွ..ဒါဆိုမမကကျွန်တော့်အလာကိုစောင့်နေတာပေါ့ဟုတ်လား ..( အေးပေါ့ဟ )ဟာကွာ မမ မကောင်းဘူးကွာ …ကျွန်တော်လည်း ခပ်ချွဲချွဲလေး သူ့ကိုပြောလိုက် တယ် မမ ကမင်းကိုမြင်မြင်ချင်းဘဲ မင်းနဲ့အလိုးခံချင်နေတာ မင်းဘော်ဒီ ကိုကြိုက်လို့လေ …မင်းနဲ့များအလိုးခံလို့ကတော့ မင်းက မမကိုဘယ်လောက်များ ဆောင့်လိုက်မလည်းလို့တွေးတွေးနေမိတာ …ဖြစ်ချင်တာ့ မင်းအစ်ကို ကိုကိုမြင့် ကလည်း ရှေ့တန်းသွားနေတော့ မမ စောက်ဖုတ်က ခံချင်လျှက်နဲ့ ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ် ထိုးထည့်ပြီးမွှေပေးနေရတယ်လေ ..
အဲဒါကြောင့် ရှင်ကလေးရဲ့အလိုးကိုခံချင်နေ မိတာပေါ့ .ဟိုက် . ငါ တော့် ..သူကလည်းကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်မှာခေါင်းလေးတင်ပြီးကျွန်တော့်ဗိုက်တွေ နို့သီးတွေကိုလျှာနဲ့ယက်လို့ လက်နဲ့ပွတ်ပေးလိုက် ဂွေးဥတွေကိုသူ့လက်နုနုလေးတွေနဲ့ အသာလေးဆုပ်နယ်ပေးနယ်တယ် အရည်တွေပေကျံနေတဲ့လီးကို လက်နဲ့ဆွပေးနေ သေးတယ်အိပ်နေတဲ့ငပဲကြီးကလည်း မာန်ဖီလာပြန်ပြီ ..မောင်ရယ် မရဲစောက်ပတ်ထဲကယားနေတယ်ကွာ … နည်းနည်းဖြေပေးပါဦးနော် …သူ့အသံလေး က ခပ်ညုညုလေးရယ် . ကျွန်တော်လည်း သူ့ခေါင်းကဆံပင်လေးတွေကိုလက်နဲ့သပ် ပေးလိုက် သူ့နားရွက်လေးကိုအသာလေးကိုက်လိုက် နားထဲကို လျှာဖျားလေးထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်တော့ သူ့ခေါင်းလေး လည်လာတယ် … သူ့လက်ကလည်းလီးကြီးကိုတအားဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ် . အသက်ရှူသံတွေလည်းပြင်းလာတယ် ..
သူ့လည်ပင်းကိုသွားတွေနဲ့ကိုက်ခဲလိုက် နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့စုပ်ပေးလိုက်တော့..( အား မောင်ရယ် လည်ပင်းကြီးလည်းပေါက်သွားပါဦးမယ်ကွာ … အ အ )ကျွန်တော်လည်း သူ့နို့တွေကို ဘယ်ညာပြောင်းပြီးစို့ပေးနေလိုက်တယ် … စောက်ဖုတ်ကိုလည်း ကျွန်တော့်လီးထိပ်လေးနဲ့ အထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေးနေလေတော့( အို အို့ … မောင်ရယ် … မသနားတော့ဘူးလားကွာ အတွင်းထဲက ယားနေပြိ)ကျွန်တော်လည်း သူ့ပေါင်၂ချောင်းကို အသာဖြဲပြီး ကျွန်တော့်ကျောနောက်ဘက်ကို ရောက်စေလိုက်တယ် …ကျွန်တော်ကဒူးထောက်ထားပြီး လီးကိုစောက်ပတ်ဝမှာ တေ့ထားပြီး အသာလေး ဖိထည့်လိုက်တယ် …( အ အ … အပြည့်အကျပ်ပါဘဲ နော် . မရဲ့စောက်ပတ်ပြီးကွဲသွားမလားဘဲကွာ အိုး အို့ )ကျွန်တော်လည်း ထိပ်ဖျားလေးကိုဘဲထည့်ပြီး ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အသာလိုးပေးနေမိတယ်..
ကိုကိုမြင့်ကရှေ့တန်းထွက်သွားတာ( ၅လကျော် ) ပြီကတစ်ကြောင်း ကျွန်တော့် လီးကလည်းနည်းနည်းထွားနေတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် . အဲဒါကြောင့်စောက်ပတ် မှာနည်းနည်းကြပ်နေသည် . နောက်မှ လီးကိုအလယ်လောက်ထိဆတ်ခနဲထိုးသွင်း လိုက်တော့ အားခနဲ့အော်ပြီး ဖြေးဖြေး လုပ်ပါ မောင်ရယ်ထိုနောက် ကတော်မမများအား အဘိုးကြီးများ ပြန်မလာခင်ထိ အလှည့်ကျစားသုံးခဲ့ပါသည်။…ပြီးပါပြီ
Categorized as အင်းဆက် Tagged အန်တီသွယ်